Dhaawac Culus ayuu ahaa Marki la Badbaadiyey, 30 Sanno ka Dib ayuu la Kulmey Askarigii DNolosha la Jeclaadey – Xogmaal.com
Dhaawac Culus ayuu ahaa Marki la Badbaadiyey, 30 Sanno ka Dib ayuu la Kulmey Askarigii DNolosha la Jeclaadey
By MN	 Last updated Sep 17, 2021
Inkasto oo ay tahay qayb ka mid ah wanaaga aadanaha ayna dhacdo marar badan, hadana waa mid xaqiijinteeda ay aad u yartahay in la islahelo labadi dhanac ee ay qasadu dhexmartey. Waa askari badbaadiyey ninkii uu dililahaa oo waliba dalkiisa ku soo duuley, misana magaalo uu wax ka qabsadey oo laga kicinayey ku dhex dhaawacmey. Najah Caboud oo Ciraaq u dhashey ayaa dagaalki Ciraaq iyo Iiraan waxaa uu ku dhaawacmey dagaalki ugu horeeyey ee uu ka qaybgaley.
Dagaalki Ciiraaq iyo Iiraan oo billowdey 1982-di, waxa uu ahaa dagaalki ugudheeraa ee labo dal dhexmaro qarnigii 20-naad, dad iyo maal badana waa ay ku baaba-een. Najah Caboud waxa uu ahaa 17 jir ka tirsanaa ciidanka Ciraaq. Waxa uu ka mid ahaa askartii qabsateyt Khorramshahr, Iiraan. Najah waxa loo tababarey ku dagaalanka taangiyad. Sida lagu waramey, ciidankii Ciraaq ee qabsadey magaalada waxa ay galeen xadgudubyo ka dhan ah bini-aadanimada oo isugu jirey dil, kufsi, dhac iyo waxkasta oo ay damci kareen in ay dad ku dhibaateeyaan. Halka qorshaha dowlad Iiraan ee dib u qabashaduna ay ahayd jawaab u dhiganta oo ku asteysneyd maxbuus la-aan, micnaha qofkasta oo la qabtaa dhaawac iyo dhaawac la-aanbo hala dhameystiro.
Waqti gaaban ka dib qabashadi Khorramshahr ee Iiraan, Najah Caboud waxa uu u dhaawacmey si xun. Madaxa, xabadka iyo dhabarka ayuu kawada dhaawacmey. Waxa uu ku gurgurtey dhufeys u dhawaa isaga oo daawanayey xarbinta labada ciidan ee isdhexgaley, waxa uuna isu qilbeeyey dhimasho. Gabagabadii weerarki ay Iiraan dib ugu qabsatey Korramashahr ayaa Zahed Haftlang oo 13 jir reer Iiraan ah oo markaas un ka soo baxay tababarka ciidanka ee kalkaalinimada caafimaadka waxa lagu amrey in uu dhufeysyada ku soo dabiibi dhaawaca ciidanka Iiraan. Waxyar ka dib marki uu socdey ayuu dareemay qof ka taahayo meel mugdi ah. Toosh ayuu ku ifiyey waxa uu arkey dhaawaca dhabarka ee Najah Caboud wuuna u tagey. Hasa ahaatee, labada askariba waa ay kala shakiyeen.
Zahed Haftlang waxa uu islahaa amuu askarigan reer Ciraaq isku kaa qarxiyaa, halka Najah Caboud-na uu aaminsanaa in uu ninkan godka u soogaley dilistiisa. Zahed ayaa isaga oo wali shakisan waxaa uu gacanta galiyey jeebka sare ee Najah, waxa uuna ka soo sarey sawir ay ku jiraan Caasha Najah iyo wiil yar oo ay dhaleen. Markaas ayuu Zahed Haftlang go-aansadey in uu badbaadiyo Najah Caboud.
Badbaadinti Najah Caboud
Zahed Haftlang waxa uu u xirey tuubadi falenbada oo uu daawo ka siiyey, balse mudo koobanba waxa ka dhamaadey dawadi. Waxa uu arrinti la wadaagey qaar ka mid ah ciidanka Iiraan isaga oo aan u theegin halka uu yaallo Najah. Askarti uu xogta la wadaagey ayaa kala talisey waxa uu ku jiro iyaga oo u sheegay in la tooigan doono hadii sheekadan la ogaado. Qodobka uu eersan doonana uu noqon doono taageerid cadow.
Badbaadinti iyo kulankoodi danbe? Qaybta labaad kala soco.
Shirkadaha Daawooyinka Sameeyan oo Dhacay Mareykanka
Geeridi Abubakari Yakubi ee Qaranka Gaana iyo Ajax u Ciyaari Jirey ayaan Wali Meel la…
© 2022 - Xogmaal.com. All Rights Reserved.